Nhau - Zuva regore idzva muna 2021
Zuva regore idzva muna 2021
Mune inova coronavirus pneumonia denda rakapararira pasirese, tichaenda kunoonekana muna 2020 uye titange muna 2021. Pachiitiko chekusiya chekare kuti chigamuchire chitsva, pachinzvimbo chevatungamiriri veboka reChenguang bio, ndinoda kuwedzera zvitsva kukwazisa kwegore uye zvishuwo zvepachokwadi kuvashandi vese nemhuri dzavo vari kunetseka kunze kwenyika uye kumba, uye nevatungamiriri pamatanho ese, vese vanogovana, vatengi, vanobatirana uye shamwari kubva kumatunhu ese ane hanya uye anotsigira kusimudzira kweChenguang bio.
Makumi maviri emakore ekushanda nesimba, makumi maviri emakore echirimo nematsutso michero. Kwemakore makumi maviri apfuura, isu tave takanamatira kuchisimba chekururama kukuru, tichishanda nesimba uye takazvipira, uye hatina kuita zvishoma kuyedza kupfuura chero ani zvake. Chenguang bio yakagadzira kubva kumusangano wewekishopu kuita kambani yemarudzi akawanda yakanyorwa ine anopfuura makumi matatu emakambani. Kubva kune yekutanga chigadzirwa chimwe checapsanthin, Chenguang bio ikozvino nhanhatu nhevedzano, anopfuura zana marudzi uye matatu epasi zvigadzirwa zvekutanga Iyo inotungamira bhizinesi mune yekudyara yekudyara indasitiri. Kubva pamwana mudiki kudzikama kuzvivimba, kubva pambesa isina kusimba kusvika mukukura kuita muti murefu, iyi ingano yeindasitiri yakanyorwa nevanhu vese veChenguang vane kurwa uye nehunyanzvi!
Muna 2020, inoverengeka coronavirus pneumonia epidemic yakarova zvakanyanya, uye hupfumi hwenyika hwakatambura kurasikirwa kukuru. Pakutanga kwedenda, mamiriro ekudzivirira chirwere chepamba nekudzivirira kwaive kwakanyanya, uye zvekurapa zvaishomeka. Iyo kambani yakatenga doro, masiki, zvipfeko zvekudzivirira uye zvimwe zvinhu kuburikidza neyekumba neyekunze zviwanikwa kwenguva yekutanga, yakashanda nguva yakawandisa kugadzira lycopene nyoro makapisi, uye yakapa kune yekumberi denda rekurwisa denda. Nekukurumidza kupararira kwedenda rekunze, kambani yakapa nguva masiki, lycopene nyoro makapisi uye zvimwe zvinhu kune vatengi vekunze. Munguva yedenda, doro rinodarika mamirioni gumi, mamaki, zvipfeko zvekudzivirira, macopuleti akanyorovera uye zvimwe zvinhu zvinorwisa denda zvakapihwa nzanga, zvichipa kurwira denda iri. Kune rimwe divi, zvinoenderana nemamiriro ekudzivirira uye kudzora, kambani yakanyatso kumisikidza kutanga kwebasa nekugadzira kuti ive nechokwadi chekushanda kwakasimba kwekugadzira uye kushanda, kunyanya zvakarongedzwa vashandi kuti vaite kudyara kwemarigold muXinjiang nekukurumidza sezvazvinogona Mutambo weChirimo, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti basa remwaka harizokanganiswa. Pamusoro pegore rapfuura, vashandi vese vakaita nhamburiko huru kudzikisira mhedzisiro yedenda, kuve nechokwadi chekambani kushanda kwakasimba uye kukura kwebhizimusi kuita zvichipesana nemaitiro. Mari yekutengesa yekambani uye purofiti zvasvika padanho idzva, uye mari yainotengesa kunze kwenyika yakapfuura mamirioni zana emadhora ekuAmerica. Mutengo wayo wemusika wakawedzera kubva pamabhirioni e3.8 pakutanga kwegore kusvika pamabhirioni mapfumbamwe parizvino.
Muna 2020, kambani inoomerera kune pfungwa yevatengi-yakanangana, inoita zvakadzama kurongedza zvakanakira, uye inovandudza yakazara yemakwikwi mukana wezvigadzirwa. Iyo yekutengesa vhoriyamu ye capsanthin yasvika padanho nyowani; huwandu hwekutengesa hwezvinhu zve lutein zvave zvichiramba zvichikura, uye kuburikidza neye pre-sale mode, yakaita basa rakakosha mukudzikamisa kuchinja kwemutengo uye kuchengetedza kusimudzira kune hutano indasitiri; mapuroteni mbishi zvigadzirwa vanovimba nechikwereti kuti vaone iko kukiya-iko kushanda uku uchitenga nekutengesa, kudzivirira njodzi; hutano hwekutengesa chikafu hwawana budiriro nyowani, OEM uye bhizinesi rekutengesa kunze kwatanga, uye kudyidzana kwekunze kwave nzira nyowani yekushambadzira Maitiro ekuvandudza ezvikafu zvinovaka uye zvigadzirwa zvemushonga zvakanaka, uye kutengesa kwecurcumin, svutugadzike yembeu yemazambiringa uye zvimwe zvigadzirwa zvave zvakakosha kukura. Panguva imwecheteyo, kambani inoshingairira kusimudzira kuvakwa kweiyo mbishi yezvinhu. MuXinjiang uye Yunnan Tengchong, iyo nzvimbo yekudyara yemarigold inopfuura 200000 mu; iyo stevia yekudyara nzvimbo yakatenderedza Quzhou County inopfuura 20000 mu; sinazonggui purazi reZambia kambani yekurima yakapedza 5500 mu yekudyara mhiripiri, qishengsheng purazi yapedza ingangoita 15000 mu yekusimudzira ivhu, uye yaita basa rekudyara kwemarigold uye pepper.
Muna 2020, kambani inoomerera kune yekugadzira tekinoroji shanduko uye inoramba ichiwedzera yayo yemakwikwi mukana. Iyo yekugadzira nzira yekuvandudza silymarin yakapedzwa zvakabudirira, goho raSilymarin rakawedzera kubva pa85% kusvika pa91%, uye mutengo wekugadzira wakaderedzwa zvakanyanya; iko kuwedzera kwekugona kwekugadzirwa kweprotein kwakapedzwa muKashgar Chenguang, uye kugona kwemazuva ese kwembeu yakajeka kwakawedzerwa kubva pamatani mazana mana kusvika kumatoni mazana matanhatu; kugadzirwa kwemaitiro ekuvandudza stevioside yakaona shanduko yekugadzira yeCQA zvigadzirwa; Iko kushandurwa kwezvigadzirwa zveQG zvakatorwa kubva pakudya kweTagetes erecta kwakapedzwa, uye iyo imwechete tambo yezuva nezuva yekugadzirisa kugona kwechrysanthemum chikafu yakasvika gumi matani 0 matani.
Muna 2020, kuvakwa kwemapurojekiti matsva ekambani kuchasimudzirwa nekukurumidza kuunganidza simba rekusimudzira ramangwana rekambani. Iyo biomass steam bhaira yakaiswa mukushandisa, uye mutengo wemhepo wakadzikiswa; iyo mitsara mitatu yekubvisa yeYanqi Chenguang yakabatanidzwa, uye zuva nezuva kugadzirisa kugona kwepepuru inoramba iri matani zana nemazana manomwe. Panguva imwecheteyo, kuvakwa kwekunatsa uye kusanganisa yekugadzira tambo kwapera, uye kugadzirwa kwakabatanidzwa kwekuchera, kunatsa uye kunongedza musanganiswa wezvigadzirwa zvemhiripiri muXinjiang zvazadzikiswa. Tengchong Yunma kambani yakawana iyo maindasitiri hemp yekugadzirisa rezinesi neiyo shoma mari, vakaona yepamusoro tekinoroji kuburitsa uye vakagadzira zvigadzirwa kutengesa, uye vakaita danho rakasimba pane yekambani maindasitiri hemp indasitiri kurongeka. Kuvakwa kwe "nzvimbo nhatu" dzekambani yaHandan Chenguang yakaita budiriro, iyo R & D nzvimbo uye nzvimbo yekuyedza yakavhurwa zviri pamutemo, zvivakwa zvekugara zve8 zvakatorwa, zvivakwa zvekugara zve7 uye zvivakwa zve9 zvekugara zvakatorwa Kupedza kuvaka; zvisungo zvinoshandurwa zvakaburitswa mushe, zvichisimudza yuan mamirioni mazana matanhatu nemakumi matatu; iyo nyowani yekugadzira mutsara weasingawanzo mafuta, Hetian Chenguang chirongwa uye Yecheng chengchenlong chirongwa chakaiswa mukushanda; kuvakwa kweTumushuke Chenguang chirongwa uye API chirongwa chakaitwa zvakarongeka.
Muna 2020, kambani inoomerera chinoumba R & D kushumira kugadzirwa uye oparesheni, ichi- kusimudzira chigadzirwa muitiro kuvandudzwa, uye anoramba anovandudza zvigadzirwa zvitsva uye mafomu. Kuburikidza nekutsvaga pamwe nekuvandudzwa kwepepuru oleoresin salting kubvisa maitiro uye colloidal pigment kurapwa maitiro, iko kushanda kwekugadzira kwakazadzikiswa, dambudziko rezvivakwa rakagadziriswa, uye kupihwa kwemusika kwakadzikamiswa; Iko kushandurwa kwekushandurwa kweLycopene oleoresin saponification uye chirongwa chekristallisation chakapedzwa, uye chibereko chechigadzirwa chakagadziridzwa zvakanyanya; iyo yekushandurwa kwemaindasitiri erosemary mushoma, silymarin uye zvimwe zvitsva zvigadzirwa zvigadzirwa zvakapedzwa, uye hukuru-hukuru hwekutengesa hwakazadzikiswa; QG, CQA, Wanli, nezvimwe. Iyo nzira yekushandisa yeShouju yekumwa dhonza, gariki polysaccharide uye zvimwe zvigadzirwa zvitsva zvakave zvakatemwa; iyo padyo infrared online uye isina internet yekuona matekinoroji awana mabudiro matsva, uye kuvakwa kwehunyanzvi chikuva kwave nekufambira mberi kutsva, uko kwakaisa hwaro hwakasimba hwekambani-refu-refu kukura mune ramangwana. Iyo kambani yakapihwa yechitatu "yakaitwa kuChina · isingaonekwe shasha" uye iyo "Oscar" yeChina indasitiri mibairo.
Muna 2020, kambani ichatora vanopfuura vanachiremba makumi matanhatu nemasters kuti vabaye ropa idzva mubhizinesi; kuongororwa kwakazvimirira kwemazita ehunyanzvi kunopenengura nzira yeku maneja mapoinzi, uye huwandu hwevanjiniya vakuru huchawedzera kusvika makumi maviri nematatu; ichaenderera mberi nekudzamisa tarenda yekudzidzisa modhi ye "chikoro bhizinesi kubatana, indasitiri dzidzo kusangana", uye pamwe chete kudzidzisa 6 vanachiremba uye masters. Vashandi vatatu vekambani vakasarudzwa se "yepamusoro-notch matarenda madiki muHandan Guta" uye "matatu matatu matatu matatu Tarenda Project" muRuwa rweHebei; Yuan Xinying akahwina zita rekuti "yenyika yevashandi modhi" uye akazova mumwe wevashandi vemuhurumende muQuzhou mushure memakore anopfuura makumi matatu, achinyatsoratidza "kufambidzana kwevanhu uye mabhizinesi".
Muna 2020, kambani ichaenderera mberi nekuvandudza manejimendi sisitimu uye kusimudzira padanho remabatiro akanaka. Isu tinoramba tichisimudzira kusimudzira, kuzviita, uye nekuvandudza mashandiro ebasa uye nematanho ebasa. Ramba uchisimudzira masisitimu manomwe ekugadzirisa manejimendi, uye nekuisa hwaro hwekutungamira kwekuvakwa kwemusangano wedigital. Dhipatimendi revatungamiriri rinovandudza mashandiro ehutariri anosvika kune mamwe masabhodhi uye inosimbisa manejimendi uye kutonga kweanopa. Kugara uchisimudzira kuongorora uye kukurudzira nzira, uye zvirinani kutamba hutungamiriri uye basa rekurudzira reyedzo uye yekukurudzira system.
Mushure memakore makumi maviri ekushanda nesimba, kambani yakaunganidza matarenda, tekinoroji, capital, chikuva, tsika nezvimwe zviwanikwa. Mune ramangwana, isu ticharamba tichipa kutamba kuzere kune zvakanakira michina yekuchera michina, michina yekugadzira, yepamusoro-kumagumo R & D nekudzora kwemhando yepamusoro, sanganisa zviwanikwa zvinobatsira munyika, mhanyisa kufambira mberi kwekuvaka kwenzvimbo mbishi yezvinhu muZambia, ramba uchivaka chivakwa chechisikigo uye chikuva hutano hutano, uye nekusimbisa kusimudzira hukuru hutano Hutano indasitiri inopa inoshanda uye inokwanisika chikafu chehutano chevanhu.
Muna 2021, tinofanirwa kuita basa rakasimba mukugadzirisa zvakanakira zvigadzirwa zvedu, kuramba tichigadzira zvakanakira kukwikwidzana kwezvigadzirwa zvedu, nekuwedzera nzvimbo yemusika wecapsicum, capsicum oleoresin, uye zvigadzirwa zve lutein; gadzira imwechete chigadzirwa chinokwikwidza zvakanakira hutano uye zvekurapa zvigadzirwa, stevioside, uye zvinonhuwira zvigadzirwa, uye shingairira kuve mutungamiriri muChina; tora matanho akati wandei ekusimudzira kuvandudzwa kweGinkgo biloba mushoma, rosemary mushoma, silymarin, uye zvigadzirwa zvemaindasitiri. Kutengeswa kwemusika wehemp nezvimwe zvigadzirwa zvinowedzera kurimwa kwenzvimbo dzekuwedzera hupfumi hwekambani, uye kugoverwa kwechikafu chehutano nemushonga wechiChinese. ichaenderera nekuvandudza kukwikwidza kwavo uye kuyedza mabhenefiti akakura.
Muna 2021, isu tinofanirwa kutevedzera pfungwa ye "matarenda, budiriro uye mabhenefiti", tichienderera nekuvandudza manejimendi maitiro ekutsvagisa kwesainzi, uye nekukurumidza shanduko yesainzi uye tekinoroji kubudirira. Namatira kune yakazara mashandisirwo ezve zviwanikwa, ramba uchisimudzira kuvandudza uye kutsvagisa anti mishonga yezvigadzirwa, mhanyisa kuvakwa kwakazvimirira mhando yechikafu chikafu, uye mhanyisa kuvandudza kwehupenyu hwehupenyu indasitiri. Iine "nzvimbo nhatu" sekutsigirwa, edza kuvaka "yepasi rese inotungamira" yesainzi chikuva. Tinofanira kushingairira kuunganidza yekutanga-kirasi yakazara, nyanzvi uye anotungamira matarenda muindasitiri kumba nekune dzimwe nyika, kugara tichivandudza vashandi kudzidzisa system, kupa zvizere kutamba kune kugona kwevashandi, uye shingairira kuvaka yepamusoro-chikamu chikamu indasitiri nyanzvi timu iyo inoda kushanda, inogona kushanda uye inogona kutsigira kukurumidza kukurumidza kwekambani.
Muna 2021, isu ticharamba tichisimudzira kuvakwa kwehutarisiro hwemanyorerwo, maitiro uye izvo, uye nekuvandudza nhanho yekutonga kwakanaka. Ramba uchibatanidza uye kugadzirisa iyo yekugadzira chengetedzo manejimendi sisitimu, simbisa mutsvuku mutsetse kuziva kwekuchengetedza kugadzirwa, simbisa chengetedzo kugadzirwa; ita basa rakasimba mukutungamira kweanomwe masisitimu ekugadzira, shingairira kuronga kuvaka kwedhijitari modhi musangano, ramba uchigadzira zvigadzirwa zvekugadzira, kugadzirisa kukwikwidza kwakazara kwezvigadzirwa; kushingairira kusimudzira kugadzirisazve hwendefa rekodhi, uye kusimudzira kukurumidza uye zvirinani kuvandudzwa kwebhodhi rekodhi bhizinesi.
Muna 2021, isu ticharamba tichitsigira chirevo chepfungwa che "tsika dzakajairika dzevanhu nemabhizinesi", tungamira mberi tsika yekambani yakachena uye yakatendeka, vanoshingaira uye vakazvipira, vakatendeka uye vakavimbika, vakatendeseka uye vanozvibata, vanotevedzera musimboti yekuvavarira vanhu, uye nekupa yekutanga-kirasi basa chikuva kune ruzhinji rwevashandi kuti vazive zviroto zvavo uye hunhu.
Mugore idzva, isu tinofanirwa kutevedzera kutungamira kwehunyanzvi uye kurwira kwakaomarara, nemweya wekubata zuva uye kutsungirira, nhanho nhanho, takanangana nechinangwa chikuru chekuvaka hwaro hwenyika hwesainzi, kuita indasitiri yehutano hukuru uye kusimba, uye kupa mipiro kuhutano hwevanhu, simbisa mberi neushingi, uye pamwe chete kunyora ramangwana rakajeka reChenguang biology!
Chekupedzisira, ndinokushuvira zuva rinofadza reGore Idzva, basa rakatsetseka, mufaro wemhuri uye zvese zvakanaka!